Farfalla FMW-239Q5BS Microwave (900 Watts) - Red/Black | Buy online | SHOP.COM.MM
Farfalla FMW-239Q5BS Microwave (900 Watts) - Red/Black
Farfalla FMW-239Q5BS Microwave (900 Watts) - Red/Blackအဆင်ပြေပါတယ် သုံးရတာ တခါတလေမှသုံးတယ် Read more Hide
Farfalla microwave ကဖန်ရှင်တွေအရမ်းစုံလို့သုံးတာတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲပြုတ်တာတို့ ဟင်းနွှေးတာတို့ကိုမြန်မြန်လုပ်နိုင်လို့ တကယ်သဘောကျပါတယ်။ Read more Hide
Haven't had this Farfalla microwave for long, but it's great so far. Paidagood price. Looks nice. Read more Hide
Farfalla အမှတ်တံဆိပ် မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်က ကြာရှည်ခံပြီး သုံးရတာအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ Read more Hide
အသုံးပြုရအဆင်ပြေတယ့် Farfalla က မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်လေးပါ။ သီတာလည်း သုံးနေပါတယ်..စသုံးခါစဆိုပြီး အသုံးမပြုတတ်တာမျိုးလည်းမရှိဘူး..နားလည်လွယ်တယ် ဖန်ရှင်တွေကို။ Read more Hide
Specifications of FMW-239Q5BS Microwave (900 Watts) - Red/Black